Posted: Hagayya/August 15, 2015 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (4)
Warra bara 2008 jijjiirama keessa turani fi dhiyoo kana tokkummaa jaarmayoota Oromoo afurii (ABO) uumne ykn walittibaqne jedhan yoo fudhanne, tokkummaa uumuun waan gaarii dha; kun gammachuudhaan simatamuus qaba. Ani akka ilma Oromoo tokkootti baay’een itti gammade. Haa ta’u malee, wanti gaafii natti ta’e ni jira. Jarri kun akka dubbatanitti (dhiyoo kana hogganaan isaanii akka dubbatetti) waraanallee ijaarratanii akka qabanii dha. Waraanni isaanii kunillee, kan milishaa ajjeesu qofaa otuu hin taane, kan Wayyaanee dugda cabsuu danda’u akka ta’e ibsame. Yoo dhugumatti kana qabaanne, anaaf gammachuu daangaa hin qabnee dha. Garuu kun hammam dhugaa akka ta’e Waaqayyoo/Rabbi haa beeku! Koottaa nutti makamaa ykn nu wajjin tokkummaa ijaaraa jedhanii kan yaamicha godhan, waan humni isaanii kun caalaa fi cimaa ta’eef ta’inaa laata?
Dhumarratti, dhaamsi ani dabarfachuu barbaadu, jaarmayaa heddoomsuun; maqaadhaan taphachuun; asii fi achi dhama’uun; ejjannoo tokko ykn kaayyoo ifa ta’e tokko dhabuun; kaayyoo tokko ykn walfakkaataa otuu qabanuu waliin hojjechuurratti wal lagachuun; garagara hiramuun; diinaaf qaawwa uumuun; beekumsa, dandeettii, qabeenya fi humna ofii garagara hiranii mooraa ofii laaffisuun dhaabbachuu qaba. Maqaa otuu hin taane, jaarmayaa hojiidhaan waan tokko agarsiisuu danda’utu deeggarsa uummata bal’aa Oromoo argachuu danda’a. Dubbachuu qofaa otuu hin taane, waan dubbannu hojiidhaan agrsiisuutu jabina jaarmayaa tokkoo mul’isa. Waaqayyo/Rabbii Ayyaanni Oromoo hubannoo nuuf haa kennu!
Barruu fi yaada keetiif galatoomi.
Dhaabni keenya jaalatamaan (ABO)n rakkoolee uumaman karaa Ilaaf Ilaameen irra aanee jabaatuun yeroon isaa amma. Waan ati barreessite keessatti himi kun ilaalcha gahaa argatuu qaba gurmuulee ABO biraa. “Maqaa otuu hin taane, jaarmayaa hojiidhaan waan tokko agarsiisuu danda’utu deeggarsa uummata bal’aa Oromoo argachuu danda’a.” Ittis dabalee hanga Kaayyoon gar gar hin tahinitti dhimma sabaa dursanii yeroon warri tokko tahuu danda’an tokkummaa uuman, warri kaan immoo diina hundee irratti bobbahan amma.
Kan Dhaabni ABO inni dhugaa kan Obbo Daawudiin hoogganamu jette dhugaadha. Garuu dubbiin Of kenniinsaan gaafatama kana ofirratti hubatanii dhiibbaa fi wareegama barbaachisu baasuudhaan tokkummaa sabni keenya hawwu kana fiduudha. Ammas yeroon hin dabarre jennaan gareelee ABOn.
Abddikoo bayyenn setboonaa wanaani ani yaduu gaakookesaa jiruu katabidee galtoommi galni kankee blisumma hatwuu
oumer Abuki Reply